Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလားဘက်မှ ရခိုင်ရွာများ ကိုယ်တိုင် လုံခြုံရေး ယူနေရဆဲ
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် ဇွန်လအတွင်းက ဒေသခံ တိုင်းရင်းသူများ ရရာလက်နက် စွဲကိုင်၍ မိမိကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ရန် အသင့်ပြင်ထားခဲ့ကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်အခြမ်းရှိ ရခိုင်ရွာများတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ တလပြည့်ခဲ့သည့်တိုင် အာဏာပိုင်များ အကူအညီဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုံခြုံရေးယူနေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Rakhaing Welfare Association ၏ မြစ်နားရွာ ဌာနခွဲ စည်းရုံးရေးမှူး ကိုအောင်ကျော်ဇောက ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ဘက်မှ ရခိုင်ရွာများ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးသည် မောင်တောဘက်မှ တည်ငြိမ်ချမ်းရေးနှင့် တဆက်တည်းရှိနေကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကိုအောင်ကျော်ဇောက “အခုအခါ ဒီနားကင်းကို ရုပ်သိမ်းလို့ မရသေးဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မောင်တောမှာ အခြေအနေ တမျိုးတဖုံဖြစ်လာပြီဆိုမှ ရုပ်သိမ်းလို့ရပါမယ်။ မောင်တောမှာ တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီအနီးအနားမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိတယ်၊ အဲဒီကနေ ၅ ယောက် ၁၀ ယောက်လောက်က စပြီး အော်ဟစ်တယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့လူတွေလည်း ပါလာကြမှာပဲ” ဟု ပြောသည်။
“မြစ်နားရွာ၊ ခြံချောင်း နှစ်ရွာက သီးခြားဖြစ်နေလို့ ကင်းစောင့်နေရတယ်။ တက္ကနာဘက်မှာရှိတဲ့ ရခိုင်တွေကျတော့ ဘင်္ဂလားတွေနဲ့ ရောနေလို့ ကင်းစောင့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ စိုးရိမ်မှုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကိုယ်အသိနဲ့ ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ နေကြတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
မြစ်နားရွာသား ကိုသာသာမောင်က “ရခိုင်ပြည်အခြေနေက နည်းနည်းလောက် ဆိုးနေပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ရွာကို သတိနဲ့နေဖို့ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေက ခိုင်းထားတယ်။ ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေ ပြောတာကတော့ ကိုယ်ရွာကိုယ် ကင်းစောင့်ထားမယ်ဆို ပိုကောင်းမယ်ဆိုပါတော့။ ရဲတွေ၊ Border Guard of Bangladesh (BGB) တွေကတော့ တခေါက်စီ လာစစ်တယ်။ အထက်ကလည်း တရက်မှာတခေါက် ကားနဲ့လာကြည့်တယ်။ ရဲတွေကလည်း လမ်းမှာ အမြဲတမ်းစောင့်လို့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကင်းစောင့်ပြီး လုံခြုံရေးယူနေရဆဲ ရွာများမှာ မြစ်နားရွာ၊ ခြံချောင်း၊ တက္ကနာ၊ နေလ၊ နခေါင်းချောင်းစသည့် ရွာများဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် ဒုက္ခသည်စခန်းများနှင့် နီးကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်များ လာရောက်ရန်ရှာမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အပြင် ခေတ်မကောင်းသဖြင့် ဓားပြရန်ကိုလည်း ကြောက်ရသောကြောင့် ကင်းစောင့်ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်ဟု ခြံချောင်းရွာက ဦးမောင်ထွန်းခိုင်က ပြောသည်။
“အခုက ရွာမှာ ကင်းစောင့် နေကြပါတယ်။ ရွာသားတွေ စောင့်နေကြတယ်။ ဒီရွာမှာ ၃ ဘက် စောင့်တယ်။ ရခိုင်ပြည်မှာ ပြသနာစဖြစ်ကတဲ့က စောင့်ရတာပါ။ ရွာသားတွေက ကိုယ်ရွာအေးချမ်းရအောင် စောင့်ကြတာပါ။ အဲဒီဘက်က ဓားပြတွေ လာမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကင်းစောင့်ကြတာပါ။ ညထမင်းစားပြီး ၇ နာရီလောက်ကနေ မိုးတလင်း စောင့်ကြတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ရွာလုံခြုံရေး ကင်းစောင့်ရသည့်အတွက် တာဝန်ပိုသည့်အပြင် မြန်မာဘက်က နယ်စပ်ကို ပိတ်ထားသည်မှာ တလကျော်ပြီဖြစ်၍ ရွာသားများ စီးပွားရေးကျပ်တည်းနေကြောင်း သိရသည်။
ကိုအောင်ကျော်ဇောက “အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျပ်တည်းတယ်ပေါ့။ ကင်းစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ မိုးလင်းရင် လုပ်မသွားနိုင်တော့ဘူးလေ။ နောက်ပြီးတော့ အရင်တုန်းကလို စီးပွားရေးက ဖွံ့ဖွံ့ဖြိုးဖြိုးပုံစံမျိုး မရှိတော့ဘူးလေ။ ကင်းစောင့်နေတဲ့ အချိန်ရွာကလည်း သူတို့က ညမှာလိုအပ်တဲ့ ဆေးလိပ်၊ မုန့်ပဲသရေစာ စတာတွေ ပံ့ပိုးနေရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ကော့စ်ဘဇားခရိုင်အတွင်း ရခိုင်လူဦးရေ ၅ သောင်းခန့်ရှိပြီး ကော့စ်ဘဇာ၊ တက္ကနာ၊ မြစ်နားရွာ၊ ခြံချောင်း၊ နေလ၊ နခေါင်းချောင်း၊ ရာမူ (ခေါ်) ပန်းဝါ၊ ငရကြီး၊ ရဲစု၊ သော်ဒီဂျာဒေသက မော်ရွာ၊ ကျောင်းနားရွာ၊ အထက်ရွာ၊ မဟားဇိုးကျွန်းပေါ်မှ မဒီချောင်း၊ ဘူလီချောင်း၊ သံသီးရွာ၊ ရွားကြီး၊ အောက်ရွာ စသော ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်ကြကြောင်း သိရသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 02:19
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလားဘက်မှ ရခိုင်ရွာများ ကိုယ်တိုင် လုံခြုံရေး ယူနေရဆဲ . All Rights Reserved